रातको खाना कतिबेला खादा उत्तम हुन्छ …? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / रातको खाना कतिबेला खादा उत्तम हुन्छ …?
रातको खाना कतिबेला खादा उत्तम हुन्छ …?
admin December 24, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 114 Views
यसको अर्थ बिहानको खाना जति सेवन गरिन्छ, त्यसपछि खानाको मात्रा कम गर्दै जानुपर्छ । सकेसम्म रातको खाना कम खाएकै वेश हुन्छ ।बिहान भरपेट खाना खानुपर्छ । त्यही खानाले हामीलाई दिनभरको लागि उर्जा दिन्छ । त्यसपछि क्रमस खानेकुराको मात्रा घटाउनुपर्छ । रातीको खाना सकेसम्म हल्का वा सजिलै पच्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
Previous पौष ९ गते शुक्रबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
Next एक महिनामै पेट घटाउन चाहनुहुन्छ ? सुत्नुअघि अपनाउनुहोस यी पाँच तरिका